आज देवकोटा जयन्ती; यस्तो थियो महाकविको जीवन ! - Everest Dainik - News from Nepal
आज देवकोटा जयन्ती; यस्तो थियो महाकविको जीवन !
काठमाडौँ, कार्तिक २१ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११० औं जम जयन्ती आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा देवकोटाको जन्म विसं. १९९६ कार्तिक कृष्ण औसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाको दिन पण्डित तिलमाधव देवकोटा र अमरराज्यलक्ष्मीका तेस्रा सन्तानको रूपमा काठमाडौँको डिल्लीबजारमा भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस मुना र मदनको बिछोडको प्रेम कहानी
याे पनि पढ्नुस आज महाकवि देवकोटाको जन्मजयन्ती मनाइँदै
केही समय देशको शिक्षामन्त्री रहेपनि देवकोटाको जीवन आर्थिक चुनौतीहरूसँगै बित्यो । उनले ट्युसन पढाएर खर्चको जोहो गर्ने गरेका थिए । उनले बेलाबेला सत्ताको कोपभाजन समेत बन्नुपरेको थियो ।
ट्याग्स: laxmi prasad devkota, Nepali Kavita